Tempolin'i Solomona - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Tempoly voalohany)
1 Fanomanan'i Davida
2 Fanorenana ny Tempoly Voalohany
3 Faharavan'ny Tempoly Voalohany
Talohan'ny nahafatesany i Davida dia nanangona fitaovana teo an-tampon'ny Tendrombohitra Moria ao Jerosalema hanamboarana ny Tempoly ny mpanjaka teo amin'ny tany novidiny tamin'ilay Jebosita atao hoe Aravna (2Sam. 24.21) izay nanaovany sorona.
Hita ao amin'ny Bokin'ny Mpanjaka ao amin'ny Baiboly ny antsipiriany momba ny Tempoly voalohany. Nampahafantarin'Andriamanitra mialoha ny mpanjaka Davida fa ny taranany no hanamboatra io tempoly io, araka ny Boky faharoan'i Samoela (2Sam. 7), ary vita izany tamin'ny andro nanjakan'i Solomona. Nandefa hazo sy mpandrafitra sy mpiasa trano tany amin'i Solomona ny mpanjakan'i Tiro atao hoe Hirama I. (1Mpanj. 6-8; 2Tantara 3-5).
Noravan'i Nebokadnetsara II i Jerosalema sy ny Tempoly tamin'ny taona 586 tal. J.K. (425 tal. J.K. hoy ny loharano jiosy) ary nentiny ho babo any Babilona ny ampahany amin'ny mponina tao.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Tempolin%27i_Solomona&oldid=993879"
Dernière modification le 4 Jolay 2020, à 21:35
Voaova farany tamin'ny 4 Jolay 2020 amin'ny 21:35 ity pejy ity.